नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : जातकाे प्रश्नले खाेजेकाे जवाफ के ?
जातकाे प्रश्नले खाेजेकाे जवाफ के ?
- केदार कोइराला-
साँझ करिब ६ बजेकाे हुँदाे हाे ल्याण्डलाइनमा फाेन आयाे
उताबाट: हरीशंकरजीकाे घर हाे ?
एताबाट: हाेइन, उहाँ तल भाडामा बस्नुहुन्छ
उताबाट: एकचाेटी बाेलाइदिउँ न एकदम जरूरी छ
एताबाट: एकैछिन है, म बाेलाइदिन्छु । उहाँ त हुनुहुन्न रे बाहिर निस्कनु भएकाे छ रे
उताबाट: ए, सुन्नुस त म पशुपतिभक्त महर्जन बाेल्या उहाँ आउने बितिक्कै मलाई फाेन गर्न लाइदिनुस् है जरूरी छ भनेर ।
बुवा आउनुभाे तल श्रीमतीजीले जानकारी गराएपछि मैले तल गएर बुवालाई खबर गरें । बुवा, पशुपतिभक्तजीकाे फाेन आकाेथ्याे एकदमै जरूरी छ रे आउने बितिक्कै फाेन गर्नु रे । हस्, बाबू म आइहाँले भन्दै उहाँ माथि उक्लिनुभाे र फाेन लगाउनुभाे पशुपतिजीलाई ।
एताबाट: ए हजुर, हजुरकाे फाेन आकाे रछ म एसाे टहलिन निस्केकाे थिएँ । मर्जि हाेस् न
उताबट के के कुराभाे था भएन, त्यस्तै पाँच-सात मिनेट जति कुरा भाे हाेला । फाेन राख्ने बित्तिकै बुवाले भन्नुभाे हाेइन हाै केदार बाबू तपाईंकाे घर त लच्छिनकाे पाे रैछ त । किन र बुवा के भाे ? हाेइन दरबारकाे फाेन हाेनी त्याे मलाई आकाे । पशुपतिभक्त महर्जन भनेका राजाका निजी सचिव क्या । अनि के भाे त लच्छिनकाे कुरा बुवा ? मेराे प्रतिप्रश्नकाे जवाफ नै नदि कुद्नुभाे बा त ।
हरीशंकर परियार नेपाली काँग्रेसका नेता, शाहीकालकाे मन्त्री । मन्त्री हुनु करिब तीन महिना अगाडि मेराे घरमा भाडामा बस्न आउनुभएकाे । हरीशंकर परियारसँग जाेडिएकाे मेराे घरायसी सत्यकथा जति राेचक छ त्यति नै घाेचक पनि छ । ब्राम्हणकाे घरमा दलित ? वरपर, छरछिमेकले नाक खुम्च्याउँदै गरेकाे टिकाटिप्पणीकाे कुनै वास्ताव्यास्ता गरिएन । नातापाता, चिनजानका आउने जाने क्रममा पनि ब्रेक लाग्दै गयाे । एकदिन राति अफिसबाट फर्कँदा अलि ढिलाे भएकाे थियाे । ढाेकामा पुलिस बन्दुक बाेकेर उभिएकाे देखेर डरपनि लाग्याे । “हजुर काे” पुलिसले साेधे ? म याे घरकाे घरबेटी पुलिसकाे प्रश्नकाे जवाफ त दिएँ । तपाईं किन यहाँ बन्दुक बाेकेर ? साेध्न नपाइ पुलिसले नै प्रस्ट्याए “हजुर हामी मन्त्रीज्यूकाे सुरक्षा” । मुन्तिर छिंडीमा बस्ने हरीशंकर बा त मन्त्री पाे भैसके छन् रातारात ।
कालाे काँग्रेस शाहीकालकाे मन्त्री । असन्तुष्टिकाे ज्वारभाट चलिरहेकै थियाे । शाहीकदमकाे विराेध स्वरूप दैनिक जस्तै समाचारसहित मैले चलाइरहेकाे टेलिभिजन कार्यक्रम शाहीकदमकाेविरुद्ध र आन्दाेलनकाे पक्षमा बढी केन्द्रित भैरहकाे थियाे । आन्दाेलनकारीकाे चरित्र बाेकेर राजाले डामेका मन्त्रीलाई संरक्षण दिनु उचित लागेन । झण्डा फरफराएकाेमा त आपत्ति हाेइन कसरी गाडीयाे झण्डा मूलकराे त्यता केन्द्रित थियाे । मन्त्रीबा अब त क्वाटरतिर सर्ने हाेइन ? घर छाेडाउने उद्देश्यले गरेकाे प्रश्नकाे जवाफ सुनेर मेराे मुख बन्द भाे । “केदारबाबू कतिदिनकाे मन्त्री हाे, बल्लबल्ल बास पाइएकाे छ म त जान्न क्वाटरस्वाटर ।” नाजवाफ भएर उक्ले मास्तिर । एकदिन दुईदिन हुँदै आन्दाेलनले उग्र रूप लिँदैथ्याे । टाेलटाेलबाट माेर्चासहित आन्दाेलनमा सरिक हुने क्रम बढ्न थाल्याे । टाेलबासी मित्र शिव भट्टराइले मुख खाेलेरै भने “ए काले तँ चै शाहीकदमकाे विराेधमा आन्दाेलन गर्दै हिंड्ने घरमा चैं राजाकाे मन्त्री राखेर झण्डा हल्लाउने याे भएन त्याे मन्त्रीलाई निकाली हाल” ।
कर्फ्यू लाग्याे आन्दाेलनले उग्र रूप लियाे । घरघरबाट राँकाेसहित राँके जुलुस टाेलटाेलबाट निस्कन थाले । आज मन्त्रीकाे घर जलाउने भन्ने कार्यक्रम बनेकाे सुईंकाे पाएर बेलैमा घर फर्कदै थिएँ घर अगाडि राँकाेसहित जुलुस आइसकेकाे रहेछ । राँकाे लगाउन आएकाहरूबाटै एकजनाले भन्दै थिए “ए याे त मन्त्रीकाे घर हाेइन केदारदाजुकाे घर हाे” । जुलुस अगाडि पुगेर हात हल्लाउँदै आफैंले राेके र भनें “याे मन्त्रीकाे घर हाेइन भाडामा बसेका हुन्, मन्त्री भएर बस्न आकाे हाेइन म निस्कन भन्छु तपाईंहरू जानुस्” । आग्रह गरेपछि आन्दाेलनकारी फर्के । मुटु ढुकढुक भैरहेकै थियाे । सरासर भित्र पसेर ल बा अब चैं सर्नै पर्ने भाे तपाईं । मेराे आग्रह सहस्र स्विकार्दै हुन्छ बाबु मैले आफ्नै आँखाले देखें विराेध, म आजै सर्छु भन्दै मन्त्रीजीले फाेन घुमाउन थाल्नु भाे । म लागें आफ्नाे काममा बेलुका घर फर्कँदा त भिडभाड हुने घरवरपर चराेमुसाे केही छैन सुनसान छ । मन्त्रीजी त क्वाटरतिर सरी सक्नुभएछ। “शाहीकालमा झण्डै जलेन काेइराला निवास” समाचार पनि बनाए साथीभाइले ।
राजेश हमालकाे हाइट, फाइट र साइट लाेकपृय, प्रसंशनीय र उल्लेख्य छन् दुईमत छँदै छैन । पछिल्लाे टिभी कार्यक्रमले राजेश हमालमाथि प्रश्नहरू उठे । सधैं राजनितीक दलहरूले उठाउने एजेण्डा राजेश हमालकाे प्रस्तुति बन्याे । दर्शकले हेरे, कतिले गाली गर्न पनि भ्याए । जातकाे प्रश्न के उद्देश्यले उठाइयाे ? कस्काे निर्देशनमा उठाइयाे ? राजेश हमाललाई नै किन प्रस्ताेता चयन गरियाे ? यी अनुत्तरीत प्रश्नकाे जवाफदेही काेहि छैन । सामाजिक सद्भाव बिथाेल्ने उद्देश्य हाे ? या डलर पचाउने मेलाे ? लगानीकर्ताले लगानी गर्दा नाफा त खाेजेकै हुन्छ । हाेइन याे चेतनाकाे लागि दलित समुदायकाे उत्थानकाे लागि हाे भने याे कार्यक्रम कुन वर्गले हेरे र त्याे लक्षितवर्ग कति लाभान्वित भयाे ? छ कार्यक्रम निर्मातासँग यसकाे तथ्यांक ?
हाम्राे गरिबी, हाम्राे सद्भाव र हाम्राे भावनामाथि डलर आक्रमण गरेर सामाजिक सद्भाव बिथाेल्नु नै पश्चिमाकाे लक्ष्य भैसक्याे । अझ हाम्राे कला संस्कृति, रितिरीवाज र सनातन धार्मिक सहिष्णुताकाे चिर हरण गरेर “जयमसि” समुदाय वृद्धिमा तल्लिन पश्चिमा बिचाैलियाकाे बिगबिगी जताततै फैलिँदाे छ । फरक-फरक विधाबाट आफ्नाे मक्सद पूरा गर्न लागिपरेका दलालकाे चंगुलमा विचार र विवेक बन्दक भयाे भने विद्वता र सालिनताकाे के अर्थ ? हाे जातकाे प्रश्नले डलर ल्याउने र काम गर्नेलाई शुभ लाभ गरायाे हाेला । जानेकाे, सिकेकाे सीप प्रयाेग पनि गरियाे हाेला तर सन्तुष्टि पक्कै पनि मिलेन । किनभने याे कार्यक्रमले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक सन्देश प्रवाह बढी गर्‍यो । समानताका लागि समता हाे भने कार्यक्रम निर्माताले डा. नवराज लम्साललाई प्रेरणाकाे स्राेत बनाउन सक्नुपर्थ्याे । हरीशंकर परियारकाे अनुभव प्रस्तुत गर्नुपर्थ्याे । साँच्चै उत्पिडनमा बाँचेका दुरदराजका ती दलितकाे आत्मकथा समेट्न सक्नुपर्थ्याे । दलित र छुवाछुत डलरमा बेचेर सुकिला भएका र निर्जिव जस्तै साेचबाट ग्रसित पूर्व प्रधानमन्त्री भनाैदाहरूकाे भनाइ प्रस्तुत गरेर जातपात र छुवाछुतकाे अन्त्य मदारीकाे चटक मात्रै हाे । जिम्मेवारी र जवाफदेही नै हुनुनपर्ने गैरजिम्मेवार सन्देश त कार्यक्रमकाे सूचनामै उल्लेख छ । हेर्नाेस त याे सन्देश-
कलहकाे बिउ हाे जातकाे प्रश्न भन्ने कुराकाे सन्देश त कार्यक्रमकाे शुरूमै प्रष्ट पारेकै छ । जवाफदेही नहुने सन्देश प्रवाह गर्नु नै विवाद सृजना हुन्छ भनेर स्विकार्नु हाे । दलित शब्दमाथि लगानी, छुवाछुतकाे नाममा बिग्रह नै जातकाे प्रश्नमा लगानीकाे उद्देश्य हाे भन्ने कुराकाे हेक्का राख्नुपर्थ्याे राजेश हमालले । दलितमाथि शोषण, छुवाछुतकाे नाममा अपहेलना पाच्य हुने कुरै हाेइन । त्याे जातीय उत्पिडनलाई गिजाेलेर सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने र धर्मले उचनिच देखायाे भन्दै धर्म परिवर्तन गर्न प्रेरित गर्ने डलरवादीबाट समाजलाई बचाउनु जरूरी भैसकेकाे छ । कलाकारकाे कलाकारिता समाज सुधारकाे कडी बन्नुपर्छ । सफल कलाकारकाे व्यक्तित्व राष्ट्रकाे सम्पत्ति हाे । त्यसैले पनि कलाकारकाे कलाकारिता दुरूपयाेग हुनु हुँदैन । पैसाकाे लागि जे पनि गर्छन् कलाकार भन्ने आराेप भन्दामाथि उठेर कलाकार राष्ट्रकाे गहना हाे भन्ने उदाहरण बन्नसक्नुपर्छ एउटा कलाकारले । राजेश हमालकाे व्यक्तित्वमा निशंकाेच भन्न सकिन्छ उनीमा लाेभ,लालच र घमण्ड छैन । किन प्रयाेग भए त राजेश हमाल जातकाे प्रश्नमा ? मेराे काैतुहलता मेटाउन् राजेश हमालले । महानायककाे परिपक्व यात्रामा तगाराे हाल्ने कुत्सित उद्देश्य राख्नेहरूका लागि खर्चिएकाे याे आलेख पढ्नेलाई फुलकाेमाला नपढ्नेलाई अक्षरकाला । ॐ नम: शिवाय।।
CGPW Nepal November 2, 2020 at 11:58 PM
धर्म र राजनीतिको प्रमुख दाइत्व भनेकै जातिबाद र असमान ताको निरकारण गर्नु हो र मानब लाई दुर्घटना बाट बचाउनु । जुनकुरा केदार जी ले आफु परिवार र सम्पतिलाई समेत जोखिममा राखेर बचाउनु भयो र यस्ता जानकारीलाई मदरलाईन्द जस्तो संचार माध्यमले स्थान दिनु भएकोमा प्रसम्सनियछ ।
CGPW Nepal November 3, 2020 at 12:00 AM
Thank you Kedar jee for your humanity.